Tüm dünyayı etkisi altına alan, Türkiye’de ise en ağır şekilde İstanbul’da hissedilen COVID 19 Hastalığı ile mücadele için İBB’nin daveti üzerine oluşturulan İBB Bilim Kurulu, önerilerini açıkladı. Sağlık Bakanlığı başta [More ...]
Shaqada Isbitaalka waxay ka bilaabatay Sancaktepe, Istanbul; Isagoo la hadlayey kulanka Golaha Wasiirada kadib, Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan wuxuu yiri, “Waxaan garoonka Atatürk Airport ugu beddeleynaa isbitaal qol kun iyo kan Sancaktepe ka dhigaya isbitaal kun qol ah. Studies [More ...]
ugu dambayntii yimid maalintii ah oo ku saabsan 12 million hawlgabka sugaya kamidka ahayd in Turkey. Goorma iyo habkee ayaa la bixin doonaa gunnooyinka fasaxa howlgabnimada ee lagu bixiyo sababa la xiriira cudurka 'Corona virus'? Corona saamaynta ku leh adduunka [More ...]
Mashruuca Hoy-Hoy ee hoy la'aantu ka bilaabmayso baaxadda isku-darka Coronavirus
Wasiirka Qoyska, Shaqada iyo Adeegyada Bulshada Zehra Zümrüt Selçuk ayaa ku dhawaaqay inay qaadeen talaabooyin cusub oo ku saabsan dadka bilaa hoyga ah, kuwa hoyga la'a iyo dadka guri la'aantu ku jirto ee ka mid ah kooxaha cudurka COVID-19 uu badankood saameyn ku yeelan karo. Qoyska, Shaqada iyo [More ...]
Akhbaarta wanaagsan ee ka socota Madaxweyne Erdoğan 136 kun SME
Warka wanaagsan wuxuu ka yimid Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan illaa 136 kun oo SME. Qaybaha amaahda ee 136 SMEs oo ka faa'iideysanaya barnaamijka taageerada amaahda ee KOSGEB iyo sii wadista bixinta bangiyada bilaha Abriil, Meey iyo Juun 3 [More ...]
Gegada diyaaradaha ee Atatürk iyo Cisbitaalada Sancaktepe Coronavirus waa la dhisi doonaa: Madaxweyne Recep Tayyip Erdo statedan wuxuu cadeeyay inaysan wax dhibaato ah ka jirin isbitaalada iyo in labo isbitaal oo cudurka faafa ah laga dhisi doono halkaasoo Yeşilköy Atatürk Airport iyo Sancaktepe midkastoo uu yahay. [More ...]
Go'aanka Gudiga Nadaafadda Degmada ee Bağcılar, Istanbul, go'aan karantiil ah ayaa loo qaatay 4-ta dhismo ee ku yaal xaafadaha Merkez, Çınar, Kirazlı iyo Kazım Karabekir ka dib markii baaritaanadii coronavirus ay fiicnaayeen. Bayaanka Maamulka Gobolka Ba Gocğlar [More ...]
Adduunku wuxuu la dagaallamayaa dagaal weyn oo ka dhan ah fayraska loo yaqaan COVID-11.000, kaasoo dilay ku dhawaad ​​19 oo qof xilliyadan adag. Fayraskan, oo ku faafa lix qaaradood, ayaa ugu badan Mareykanka, [More ...]
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa u dirtay wareeg cusub wareegtada 81aad ee Degmooyinka Gobollada loogu talagalay xayawaannada qalloocan ee ku adag helitaanka cuntada sababta oo ah nooca cusub ee cudurka 'coronavirus'. Wareegtada xayawaannada jidadka, laga soo qaado xukumadaha; ugu horayn xeryaha xoolaha [More ...]
Go'aanno cusub ayaa wali la qaadanayaa si looga hortago in KOVID-19 uu faafo. Ku dhawaaqistii la sameeyay ilaa Jimcaha, marin mamnuuc ah oo lagu tago meelaha ay ka jiraan dhaqdhaqaaqyo xoog leh sida suuqyada, suuqyada iyo gaadiidka dadweynaha ayaa la mamnuucay. Horumarradan [More ...]
maalin kasta halganka virus Corona Turkey ayaa sii wadaan in ay qaadaan tallaabooyin cusub. In kasta oo bandowga la kordhiyay, ayaa mamnuuc laga ahaa isu socodka gaadiidka dadweynaha iyo suuqyada aan lahayn maaskaro. Waxaad ka iibsan kartaa maaskaro bilaash ah EPTT AVM. [More ...]
Wuxuu u diray wareeg dheeri ah Wasaaradda Arimaha Gudaha, iyadoo laga reebay, si loo hubiyo midnimada dhaqanka ee dhalinyarada da'doodu u dhaxayso 81 iyo 18 ee bandowga loo dhigay ilaa 20 Maamul Gobaleedyada. Marka loo eego, 18-20 [More ...]
Hogaanka Wasaaradda Warshadaha iyo Teknolojiyadda, ayaa Wasaaradda Caafimaadka hoggaamisay. Nooca ugu horreeya ee qalabka neefsashada ee ay soo saartay bioSys waxaa loo qaabeeyey oo la tijaabiyay iyada oo lala kaashanayo Aselsan iyo Baykar. Qalabka lagu sameeyay Arçelik Garage ayaa hadda ah [More ...]
Ka-reebitaan ku saabsan Galitaanka Gawaarida / Xadidaya Magaalooyinka
Wasaaradda Arimaha Gudaha ayaa wareegto dheeri ah u dirtay gudoomiyaasha magaalooyinka waaweyn halkaas oo lagu soo rogay xannibaado galitaan / bixitaan iyo Zonguldak halkaas oo laga dhaafi doono xayiraadaha safarka. Sida ku xusan sidan; oo laga keenay cusbitaalka lagu daweeyay [More ...]
Wasiirka Qoyska, Shaqada iyo Adeegyada Bulshada Zehra Zümrüt Selçuk ayaa ku dhawaaqday in khidmadaha daryeelka daaweynta degdegga ah ee lagu daboolay barnaamijka SUT la labanlaabay. Wasiirka Selçuk, Caafimaadka cusub oo dhaqan galay ka dib markii lagu faafiyay rasmiga Gazette [More ...]
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Adil Karaismailoğlu, ayuu war, sida dunidu u ahaa xusuusiyay in ay sabab Kovid-19 Turkey ayaa sidoo kale qaaday tallaabooyin badan si looga hortago cudurka faafo. Si loo yareeyo culeyska dhaqan-dhaqaale ee cudurka faafa ee ku saabsan muwaadiniinta [More ...]
Shirkadda Cabdi İbrahim İlaç waxay soo saartay dufcaddii ugu horreysay ee dawada, taasoo ka dhex jirta qaab dhismeedka borotokoolka daaweynta ee Wasaaradda Caafimaadka COVID-19. Daawadii ugu horreysay ee lagu soo saaray Daaweynta Covid-19, oo ay dowladdu kugula taliso oo ay natiijo fiican ka soo baxdo coronavirus. [More ...]
Tallaabooyinka fayraska Corona oo ay ku jiraan wax ka badan tirada dadka ku nool Turkiga marka la barbar dhigo gobollada kale iyo dhaqaalaha, gaadiidka, waxaa loo aqbalay inay tahay xoogagga shaqaalaha magaalo-weynta sababo badan awgood sida 30 gobol iyo cudurada sambabaha. [More ...]
Marka la eego tallaabooyinka fayraska Corona, horumarka la xiriira bandoowga waxaa ku dhawaaqay Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan. Erdogan wuxuu shaaca ka qaaday in bandowga lagu soo rogay dhalinyarada ka yar da'da 20 sano. ILAALINTA 20 SANO [More ...]
Xagee laga mamnuucay in la socdo maaskaro la'aan?
In kasta oo cudurka faafa ee corona, oo saameeya adduunka, uu sii kordhayo saameyntooda maalinba maalinta ka dambeysa, haddana waxaa la qaadayaa tallaabooyin cusub iyada oo la adeegsanayo la dagaallanka faafa cudurka. Raisalwasaaraha Turkiga Mudane Recep Tayyip Erdogan, “Turkiga [More ...]